Vitamin B17: mushonga unoshanda kurwisa cancer - Afrikhepri Fondation
Vitamini B17: mushonga unoshanda wekenza
LLaetrile (vhitamini B17) chinhu chinowanzoitika cheglucoside fuma inotorwa kubva kumaapricot kernels akazove akakurumbira muma1970. Chidzidzo chakaitwa muvarwere zana nemakumi manomwe nenomwe vane kenza isingarapike uye maronda anoyerwa avo vakarapwa neLaetrile. Sezvo zvaive tsika panguva iyoyo, ivo vakagashirawo mavitamini uye pancreatic enzymes. Mumwe chete murwere ndiye akasangana nematanho ekusarudzira kusarapwa, 179% yezvidzidzo yakaona kuwedzera kwechirwere mukati memwedzi mitatu. Ivhareji yehupenyu hwehupenyu hwaingova mwedzi 90 chete. "Zvimwe" kurapwa kwekenza. Izvo hazvina kunyorwa kana kuramba? Zvakatora makore akati wandei, uye chokwadi chemakiriniki ekuedzwa achiitwa kutenderera pasirese, muenzaniso usati wakurudzirwa kuti uenzanise kukosha kweLaetrile mukudzivirira, pamwe nekurapa kenza, mushure mezvose. nguva zita "vitamini B3" rakagamuchirwa. VaHunzakuts vanodya zvakapetwa ka4.8-17 zvakapetwa B100 mukudya kwavo kupfuura avhareji yeAmerica, kunyanya nekuda kwekudya mhodzi dzemaapurikoti, uye zvakare mapfunde akawanda.Kufadza, hapana chinhu chakadai semari. , paHunza. Hupfumi hwemurume hunoyerwa nenhamba yemiti yemapurikoti yaanayo, uye chikafu chinochiviwa zvakanyanya imbeu iri mumazizi emaapurikoti, chimwe chezvinhu zvakakosha zveB200 paPasi. Kushanyira zvikwata zvevanachiremba zvakawana iyo Hunzacuts cancer isina mahara. Rimwe remapoka ekutanga ekurapa kudzidza Hunza akatungamirwa nachiremba anozivikanwa wepasi rose wechiBritish, Dr. Robert McCarrison.
Kunyora mu Journal yeAAA, kubva munaJanuary 7 1922, akati:
“VaHunza havana chavanoziva nezvegomarara.
Ivo vanobatsirwa nekukohwa kwakawanda kwemaapurikoti.
Vanomisa pasi pezuva, uye vanozvishandisa zvakanyanya mukudya kwavo.
Asi nei usati wanzwa nezve vitamini B17?
Zvinoratidzika sezviri nyore!
Zvakanaka, chokwadi chenyaya iyi ndechekuti Cancer Indasitiri yakadzvinyirira ruzivo urwu uye ikatoraira kuti hazvisi pamutemo kutengesa B17. Medical Mafia yakaisa mishandirapamwe "inotyisa" nekubudirira kukuru, zvichibva pakuti vhitamini B17 ine huwandu "hunouraya" hwecyanide. Izvi zviri pachena zvisiri izvo.
Zvidzidzo zvinoratidza kuti vitamini B17 haina ngozi kune utano hwakanaka.
Imwe neimwe B17 mamorekuru ine imwechete unit yehydrogen cyanide, imwe yuniti yebenzaldehyde, uye maviri mayuniti eglucose (shuga) yakavharirwa pamwechete zvine mutsindo. Kuti hydrogen cyanide ive nenjodzi, zvinotanga kudiwa kuvhura molekemu inozoiburitsa, hunyengeri hunogona kungoitwa neenzyme inonzi beta-glucosidase, isipo pese pese mumuviri wemunhu, muzvidiki zvidiki, asi muhombe munzvimbo imwechete: cancer maseru.
Nekudaro, iyo hydrogen cyanide inongovhurwa panzvimbo inowanikwa gomarara, uye izvi, nemhedzisiro inokatyamadza, inova inoparadza maseru ekenza, sezvo iyo benzaldehyde unit ichivhura panguva imwe chete. nguva.
Cancer maseru anorova kaviri, ese cyanide uye benzaldeyhde! Benzaldehyde muchetura unouraya pachawo, asi painobatana necyanide mhedzisiro yacho inouraya zvakapetwa ka100 pane painoshanda yega.
Makero emukenza anenge apera zvachose!
Asi izvi zvese hazvikuvadze kune mamwe maseru mumuviri here? Imwe enzyme, rhodanese, ichiripo yakawanda kwazvo kupfuura iyo enzyme yekuvhura beta-glucosidase munyama ine hutano, inokwanisa kudzikisira zvizere cyanide uye benzaldehyde kuita thiocyanate (chinhu isina kukuvadza), uye salicylate (inova aspirin-semarwadzo ekuuraya). Sezvineiwo, maseru ane gomarara anouraya haana maRhodanese zvachose, achiasiya zvachose munyasha dzepombi mbiri dzinouraya. Maitiro ese aya anozivikanwa sekusarudza chepfu, nekuti masero egomarara chete ndiwo anonongedzerwa nekuparadzwa.
Mazana emakiriniki ekuongorora akaitwa navanachiremba vazhinji vanoziva pasirese, kusanganisira iwo akatungamirwa naDr. Ernesto Contreras kuOasis of Hope Hospital kuMexico, anotipa chivimbo chakazara chekuti kurapwa nehurapi B17 haina njodzi kumasero akajairwa.
Idzi inhau dzakaipa dzeCancer Indasitiri. Mbeu dzemaapurikoti dzakachipa… dzakachipa chaizvo… kwete dzinodhura sevachangoburwa zvinodhaka chemakemikari.
Shamwari yangu, Jason Vale, akatambira mutongo werufu kubva kuna vanachiremba vake pakati pema1990 apo paakawanikwa aine kenza "inouraya" Akadzidza kuburikidza nekutsvagurudza kwakawanda kuti vanhu vaive nekenza vakawana kupora zvimiro mumbeu dzeapuro nemaapricot kernels, ayo sezvandambotaura pamusoro ane huwandu hwakawanda. vhitamini B17.
Jason akabva atanga kunzwa zvirinani, achidya mhodzi dzemuapuro nemaapricot kernels sechikamu chekudya kwake kwemazuva ese. Munguva pfupi, kenza yaJason yakanga yaenda chaiko. Pakabuda nyaya yaJason "Inoshamisa" paterevhizheni yenyika pakati pe1990s, yakadhonza vateereri.
zvakanyanya kwazvo zvokuti iyo mharidzo yaiparidzirwa kechipiri, vhiki inotevera.
Kushingairira kwevaoni kwakange kwakakura zvekuti Jason akazviwana azadzwa nekufona, kubva kuvanhu vanogara mhiri kwenyika. Mumakore mashoma akatevera, Jason akabatsira zviuru nezviuru zvevanhu kubudirira kurapa kenza yavo nekudya mhodzi dzeapricot kernel.
Jason ndiye akabatwa nechisimba "Gestapo" chibhakera, chakasarudzwa neDFA, akatongerwa muna Chikumi 18, 2004, kumwedzi makumi matanhatu nenhatu mujeri uye makore matatu ekusunungurwa kwakatariswa, nedare redunhu reAmerica. Vakabatana muEastern District yeNew York. Mhosva yake? Kutengesa mbeu dzeapurikoti pawebhusaiti yavo, uye kuudza vanhu CHOKWADI nezvekuporesa kwavo. Kugamuchirwa ku "nyika yemahara uye yekumusha yevakashinga".
Mushure mekugara kweanoda kusvika makore mana mutirongo, Jason akaburitswa munzvimbo yemarenamu kutanga kwa2008.
SOURCE: Kenza: nhoroondo yevhitamini B17, mushonga wepanyama uye unoshanda
Nyika isina kenza, nhau ye vitamini B17
Bhuku 360 peji rino rine yokukwanisa zvakaoma kushandura, kwete zviri zvayo michina mutauro kana kwete, asi nokuda kwokuti, kuva nezvikonzero kwenguva, vakasarudza kushandurira atakatora chete guru, zvakanga zvakaoma kwatiri kuti tibvumirane uye tisarudze chii chinofanira kusara kunze kweshanduro, nei? Nokuti bhuku iri vapfumi uye gobvu mashoko kubva peji rokutanga rokupedzisira uye kuti zvinosanganisira pamusoro kuverenga yake sei hachizati rakashandurirwa mumutauro French (Meso kutendeukira kune mishonga lobbies) apo akatsamwa kuti akanga asiri. Kubva ikozvino makore 38 ikoko, zvatinogona kufunga kuti chokwadi kuti hapana muparidzi angadai akada kutora ngozi kwokubudisa iri French zvechokwadi ane zvakawanda zvematongerwe enyika somushonga sainzi, a zvishoma semabasa echiremba mukuru weFrance Dr. Gernez, vakaiswa muimba yepamusoro nekuda kwezvikonzero zvakafanana zvingangodaro.
Bhuku rinotitora isu, kuburikidza nekutsvakurudza nehupupuriro, kuti tive nemumwe muitiro wekenza,
iyi chirwere chepasi pose, icho chinokanganisa zvikuru kune izvo zvinonzi nyika yakabudirira. Nzira iyo inofanirwa mune izvo zvinonzi mishonga yemasikirwo, iyo iyo mishonga yemishonga inotungamirira nyika yezvokurapa, inoita hondo isina basa.
Iyi nzira yakasvibirira iyo chirwere inoda kuibata pane iyo inobva uye kwete kubata zviratidzo chete nezviratidzo sezvinoratidzika kuita mishonga inonzi allopathic "orthodox" muzviitiko zvakawanda zvekenza ndeye muenzaniso.
Allopathic mishonga inobata chirwere chekenza sechirwere, mushonga wepanyama unobata chirwere ichi kubva pane ichi:
dumbu racho rinongova chiratidzo chechirwere. Kuverenga nezvazvo, tinoziva kuti kudzivirira uye pakurapa kenza anogona kuitwa nenzira dzakawanda, hapana vanachandagwinyira kutaura kuti dambudziko, asi zvose zvakasikwa kuchirapa nzira, kusanganisira kushandiswa Laetrile kana nitriloside fuma inozivikanwa amygdalin racho dzinongoitika muchimiro yaiva anenge 1200 dzinodyiwa zvinomera uye mbeu,
funga kuti kenza chirwere chisingaperi chisinganzwisisiki (chisingarapiki nokuti hachirapa pachazvo uye chinopfuurira, chigunwe chetachiona nokuti chinoitika mumutumbi uye hachipfuuriri kune vamwe vanhu).
"Hapana humwe uchapupu hwezvokurapa hwokuti hakuna chirwere chisingaperi chisingagoneki chinoporesa nemishonga kana kupindira kwemagetsi pamuviri (kuvhiyiwa)" maererano naDkt Krebs (biochemist, developer of Laetrile), muzviitiko zvose, sarudzo yakakodzera yakawanikwa mukugadziriswa kwekushaya simba kwehutano kune vanhu vakavhiringidzika (sekureva scurvy kana pellagra, somuenzaniso, izvo zvinoshaya mumavhura mavitamini C uye B3).
"Inyevero, iLaetrile inoshandiswa pamutemo kusarudzwa kusina kupindira kwekenza.
Munyori webhuku rino munyori uye munyori, kwete chiremba. Zvinyorwa zvinoratidzwa pamapeji anotevera ndezveruzivo chete uye hazvipi mazano ekurapa.
Chinangwa chavo ndechekusika chikonzero chekubvumirwa kwakagadziriswa. Kunyangwe pane chimwe chinhu chinogona kuitwa munzvimbo yekudzivirira, kurapwa kiriniki kenza haifaniri kuitiswa yoga.
Kutungamirirwa kwehupi hunopesana nekenza, iyo inosanganisira kurapa kwekudya, inofanira kuitwa pasi pekutarisana kwakananga kwevashandi vezvechiremba vane nyanzvi mundima yavo. "
Nyika isina kenza (yakakura huru) Nhoroondo ye Vitamin B17 (Laetrile)
NaG. Edward Griffin (1997, 2th Edition, 13th 1998 Reprint)
Nyika Pasina Kenza
Tenga € 24,52
Yakapedzisira kugadziridzwa muna Kubvumbi 10, 2021 12:27 PM
chikamu UTENYU NEMISANGANO
Tarisa Aquaman (2018)
Izuva rekudenga Kristu anozivisa chiratidzo kana chiratidzo?
Tarisa iyo yakaenzana 2 (2018)
Zvakavanzika zvehutano hwaDkt Sebi (Vhidhiyo)